Mpaka Sary Amin’ny Tranonkalam-baovao Voasambotra Teo Am-pandefasana Ny Fihetsiketsehana Tao Venezoela · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Avrily 2017 4:35 GMT
Elvis Flores. Sary avy amin'ny hetsika #FREEELVIS (#AVOTSORY-ELVIS), nampiroboroboan'ny VPITV.
Vaovao farany: navotsotra tamin'ny misasakalina, 6 Aprily 2017 i Elvis Flores. Nogadraina nandritra ny 9 ora izy ary voalaza fa voadaroka.
Navotsotra tamin'ny Alakamisy misasakalina ilay mpakasarin'ny VPITV, Elvis Flores. Voadaroka sy nogadraina tsy ara-dalàna nandritra ny 9 ora izy.
Ny folakandron'ny 6 Aprily 2017, nosamborin'ny manam-pahefana Venezoeliana i Elvis Flores, mpaka sary ao amin'ny fantsona antserasera VPITV (Venezoeliana mitady Vaovao). Nandefa ny fihetsiketsehana tao Caracas, izay nokarakarain’ ireo manohitra ny fitantanan'i Nicolás Maduro ny VPITV.
Notontosaina tamin'ny herinandro lasa ny fihetsiketsehana, taorian'ny nanafoanan'ny [mg] Fitsarana Tampony ny parlemanta [mg] sy nampisahanana ny asany ho an'ny [fahefana] mpanatanteraka sy ny Fitsarana Tampony tenany.
#MAIKA Fotoana izao, raha nosamborin'ny PNB i Elvis Flores, avy ao amin'ny @VPITV. Tsy fatantray izay toerana misy azy. #April6
Tamin'ny fotoana nisamborana azy, nalain'ny polisy ny fitaovan'i Flore ary noterena hampitsahatra ny fandaharany avy eo ny VPITV, izay mbola tsy azo idirana amin'izao fotoana anoratana izao.
#Maika Nalain'ny #PBN ny fitaovan'ny fakan-tsarinay nandritra ny fandefasana ny fihetsiketsehana tao #Caracas
Ny fantsona, izay mandefa ny vaovao amin'ny alalan'ny sehatra tahaka ny YouTube sy Periscope, dia nitsahatra tamin'ny fakana ny zava-nitranga tamin'ny fihetsiketsehana taona maro lasa izay mba hisorohana ny mety ho sazy ara-bola sy fanakatonana ataon'ny Komitim-pirenena misahana ny Fifandraisandavitra, izay efa nilaza teo aloha fa azo sokajiana ho fandrisihana herisetra ny fitateram-baovao fihetsiketsehana .
VOAMARINA: Any Helicoide ny mpaka sarin'ny @VPITV. Nampangain'izy ireo ho mandrakitra vaovao amin'ny faritra arovana izy. #CensorshipIsDictatorship #FreedomForElvis
Tao anatin'ny taona vitsivitsy, indrindra tamin'ny fotoanan'ny fihetsiketsehana sy ny krizy, nitodika tao amin'ny tambajotra sosialy ny Venezoeliana ary mandefa fandaharana mivantana mba hahazoana vaovao ivelan'ny fantsona ofisialy, izay iharan'ny sivana tsy mitsaha-mitombo.
Matetika alefa ao amin'ny Periscope ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety sy ny fanambarana avy amin'ny antoko politika mpanohitra lehibe indrindra. Etsy andaniny kosa, mandefa ny fivoriany amin'ny alalan'ny YouTube ny Antenimieram-pirenena – izay tsy fantatry ny sampana mpanatanteraka ny fiasan'izy ireo.
Na dia teo aza ny fisamborana mpiserasera amin'ny tambanjotra sosialy sy ny fahasimban'ny fifandraisandavitra, mbola sehatr'ady ny aterineto ao Venezoela.